IGooligan yile malware intsha ichaphazela izigidi zabasebenzisi be-Android | Iindaba zeGajethi
I-Gooligan yeyona malware intsha ichaphazela izigidi zabasebenzisi be-Android
I-Gooligan yi-malware entsha echaphazela ngaphezulu kwesigidi sabasebenzisi bezixhobo ze-Android abanengxaki yokophula imfihlo yabasebenzisi abosulelekileyo. Ngeli xesha siza kubona ukuba sazi njani ukuba isixhobo sethu sichaphazelekile okanye hayi I-Gooligan malware ebonakala kwii-APK ezingama-86 ezifumaneka kwivenkile yeGoogle.
Aba basebenzisi bachaphazelekayo ngokusisiseko ngabo basebenzisa iinkqubo ezindala zokusebenza ze-Android kwaye namhlanje sinentengiso ethe yaqhekeka ngaphandle kokuphucuka kule minyaka idlulileyo. Ingxaki le malware yenziwa ngokufikelela kwengcambu kwaye ufumane ulawulo olupheleleyo lwe-smartphone okanye ithebhulethi yakho.
Okwangoku, inkampani yokhuseleko iJonga i-Point iphethe ukupapasha ezi ndaba apho zichaza ikakhulu ukuba zithatha ulawulo lwesixhobo kwaye izixhobo ezichaphazelekayo izixhobo ezisebenzisa i-Android 4.x kunye ne-5.x. Ukufumanisa ukuba isixhobo sethu siphakathi kwabo bachaphazelekayo kufuneka singene kwisixhobo esenziwe nguGooligan simahla ngokupheleleyo apho sinokubona ukuba ngaba iakhawunti yethu iyachaphazeleka okanye akunjalo.
Olu hlobo lwe-malware luthatha ithuba lokuba semngciphekweni kweenguqulelo ezindala ukufikelela kwidatha yomsebenzisi kunye nokugcina idatha ebalulekileyo kunye nokuzenza ulwaziso ngokuthanda. Inyaniso yile Olona nyango lululo lwe-malware kukugcina isixhobo sakho sihlaziyiwe kude kube luhlobo lwamva nje olukhoyo, kodwa yintlanzi eluma umsila wayo kwi-Android ngenxa yabaqhubi, abavelisi nabanye ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Gooligan yeyona malware intsha ichaphazela izigidi zabasebenzisi be-Android
I-Gooligan malware ... isixhobo se-gooligan ... ndiyadlala ... okanye ndiphoswe yinto.
IMagneto isungula uhlobo olutsha lwebhodi yayo ende yombane
INetflix sele ivumela ukhuphelo ukuba ludlale umxholo ngaphandle kweintanethi